Jarmayaan fayyaa addunyaa dargaggoonnii fi fayya buleesse talaallii COVID-19 utuu hin fudhatin hanga bara 2022tti akka eegan beeksisee jira. Hayyuu saayinsii gameessi kan WHO soomiyaa suwaaminaatan har’a ibsa kennaniin angawoonni eegumsa fayyaa hojjettoota eegumsa fayyaa fi kanneen yeroo hatattamaaf dhaqqaban kan akka humnootii nagaa eegisisaniif maanguddootaaf dursa kennuu malu jedhan.
Swaminathan akka jedhanitti yoo xiqqaate talaalliin vaayiresii koronaa milkaa’ina qabu tokko bara 2021 ni ba’a jedhanii kan abdatan yoo ta’u garuu lakkoobsa murtaa’aa ta’uu mala jedhan. Naannoo addunyaatii talaalliwwan COVID-19 170 ol ta’an sadarkaa yaalii adda addaa irra kan jiran yoo ta’u kannen kunis talaalliiwwan kudhan kanneen sadarkaa dhumaa fi nama irratti yaalaman dabalata. Kampaniin dawaa oomishu kan US guddichi Joonsen and Joonsen fi AstraZeneca jedhaman ennaa talaalli kana yaalanitti namni tokko waan dhukkubsateef jecha yaalii isaanii dhumaa dhaabanii jiran.
Dorgommiin talaallii vaayiresii koronaa qopheessuuf taasisamaa jiru Awooppaa mara keessatti daariqa ykn infekshiniin haaraan ennaa eddummaataa adeeme kanatti ardittiin ennaa yeroon gannaa dhiyaataa dhufe kana weerarri marsaa lammataa ka’uu mala yaaddoo jedhu keessa seentee jirti. Chaansilerittiin Jarmanii Angelaa Merkel fi bulchaawwan kutaalee biyyattii 16 erga namoonni 6,638 haaraan vaayiresii koornaan qabamuun roobii kaleessaa gabaasamee booda manneen nyaataa dafanii akka cufamanii fi namoonni lakkoobsi murtaa’e qofti akkka wal ga’an dabalatee uggura sochii kaa’uuf walii galan.
Prezidaantiin Ferensaay Emmanuel Makroonis roobii kaleessaa ibsa kenaniin uggurri sa’aa galgala sa’a 3 irraa hanga ganama sa’a 12tti akka ta’u labsanii jiran. Irelaand gama kaabaas akkasuma tarkaanfii cimaa fudhateen turban afuriif uggura sochii biyyoolessaa kaa’ee jira.
Prezidaantiin Eertraa Daawwannaa Isaanii Kan Itiyypiyaa Xumuranii Deebi’an